Watch This Is Us ရာသီ 2၊ အပိုင်း (၆) ကိုအခမဲ့ online တွင်ကြည့်ရှုပါ - ဟူးလူ
Watch This Is Us ရာသီ 2၊ အပိုင်း (၆) ကိုအခမဲ့ online တွင်ကြည့်ရှုပါ
LOS ANGELES, CA - စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် - 'This is Us' အတွက်ပြဇာတ်ရုံများမှထူးချွန်သောမင်းသားဆုအတွက်ဤဆုသည်ရိုင်ယန်မီရှယ်ဗာ (L) နှင့်သရုပ်ဆောင် Sterling K. Brown တို့ကစက်တင်ဘာလ ၆၉ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် Primetime Emmy ဆုများအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘောလုံးကိုတက်ရောက် Los Angeles မြို့, California မှာ 17, 2017 ။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
2 Netflix အသစ်ဖြန့်ချိ: နိုဝင်ဘာ 1, 2017
ဤသည်သင်ဤသည် Us ရာသီ 2, အပိုင်း6အဆိုပါ 20 ရဲ့အွန်လိုင်း Hulu Live နှင့်အတူအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုပါပဲ။ Hulu Live အခမဲ့စမ်းသပ်မှုအတွက်စာရင်းသွင်းပါ။
ပျော်ရွှင်သောဟယ်လိုဝင်း, ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ ပရိသတ်တွေ! သငျသညျစီးရီး၏ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်သို့ညှိဖို့ယနေ့ညတည်းခိုနေကြသည်လျှင်, ဒီမှာသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပုံကိုပါပဲ ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ ရာသီ 2, ဇာတ်လမ်း6အဆိုပါ 20 ရဲ့ Hulu Live နှင့်အတူအွန်လိုင်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။
မသိသောသူတို့အဘို့, Hulu Live သည် NBC, နေအိမ် NBC အပါအဝင်ပေါင်း ၅၀ ပေါင်းအဓိကချန်နယ်များပေါ်တွင်သင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည့် Hulu ၏တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ။ Hulu Live အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပြီးတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာ Hulu Live ကိုမီးဖွင့်ရန်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်စာရင်းပေးသွင်းလိုပါကအခမဲ့တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို Hulu ကကမ်းလှမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Hulu Live သည်ရုပ်သံလိုင်း ၅၀ ကျော်ကိုကမ်းလှမ်းထားသဖြင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ကေဘယ်နှင့်ဂြိုလ်တုအစားအခြားဖြစ်သည်။ သင့်မှာကြိုးနဲ့ဂြိုလ်တုရှိပြီးသားဆိုရင်တော့အဲဒါဟာစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဤတွင်မှတဆင့်, ယနေ့ညရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ 20 ရဲ့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ် တီဗီလမ်းညွှန် :
နှင့်အတူလှည့်ကွက် -or- ကုသ ၁၀ နှစ်အရွယ် ဂျက်၊ ရေဗက္ကာ၊ ကီဗင် နှင့်ကိတ်ဘဝပြောင်းလဲနေတဲ့ Halloweens ရှိသည်။
ဤသည် Us Us ရာသီ 2, အပိုင်း6တိုက်ရိုက်စီးသတင်းအချက်အလက်
နေ့စွဲ - အင်္ဂါနေ့၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်
အချိန်: 9:00 P.M. AND
ခေါင်းစဉ်: အဆိုပါ 20 ရဲ့
ရေနွေးငွေ့: Stream 1 ငါ Stream2ဌ Stream3ဌ
Hulu Live ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့်အတူသင်ပြသသည့် Hulu ၏အခြား streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည် Seinfeld, အင်ပါယာ နှင့်ကန့်သတ်ကြော်ငြာနှင့်အတူစီးဖို့ပိုရရှိနိုင်ပါ။ သာမန်အားဖြင့်ဤအစီအစဉ်သည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ ကျသင့်သော်လည်း Hulu သည်သင်အားအခမဲ့ပေးသည်။ အားလုံးမကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်!
အသစ်ဖြစ်စဉ်များ ဒါကကျွန်တော်တို့ပါပဲ NBC မှထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်လည်း Hulu သို့ထပ်ထည့်သည်။ ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း, စီးရီး၏ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တစ်ခု Hulu ရဲ့နှစ်ခုအခြေခံအစီအစဉ်များအပေါ်စီးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Eric andre ပြပွဲ netflix
အသစ်ကအမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင် netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
လာမယ့် grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 13 ဖြစ်ပါတယ်
အမေရိကန် ripper တစ်ရာသီ2ရှိလိမ့်မည်